कसरी एक स्पाइनल कर्ड चोट पछि SSD लाभ को लागी योग्य हुन कर्मा®
अनुमानित पढ्ने समय:3मिनेट
जान्न चाहानुहुन्छ, कसरी एसएसडी लाभ को लागी एक पछि योग्य मेरुदण्ड चोट? प्रत्येक वर्ष त्यहाँ १,17,000,००० भन्दा बढी छन् रीढ़ की हड्डी को चोटहरु। धेरै दुर्घटनाहरु डाइविंग दुर्घटनाहरु वा अटो दुर्घटनाहरु को कारण हो। अधिकांश अवस्थामा, मेरुदण्ड चोटहरु स्थायी चोट को परिणाम हो कि असम्भव काम गर्दछ। जो कोहि काम गरिरहेको थियो वा काम गरीरहेको छ जसको एक छ मेरुदण्ड चोट र अब काम गर्न सक्दैन को लागी एक दावी फाइल गर्न सक्नुहुन्छ सामाजिक सुरक्षा अपाability्गता लाभ। जब सम्म तपाइँ अतीत मा काम गरीरहनुभएको छ र तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँ कम्तीमा एक बर्ष को लागी काम गर्न सक्षम हुनुहुन्न, तपाइँ एक दावी फाइल गर्न सक्नुहुन्छ असक्षमता.
को लागी मेडिकल योग्यता अशक्तता लाभ
के म SSI पाउन सक्छु?
भन्नुहोस्aमेरुदण्ड चोटले तपाइँलाई काम गर्न असमर्थ बनाउँछ। तपाइँ यो चोट को लागी अनुमोदित हुन को लागी SSA को मापदण्ड पूरा गर्न को लागी आवश्यक पर्दछ असक्षमता। नियमहरु जुन पूरा हुनु पर्छ SSA को ब्लू बुक मा सूचीबद्ध छन्। साथै, यो प्रत्येक को लागी आवश्यक छ के समावेश गर्दछ शर्त मान्यता प्राप्त एसएसए द्वारा। एक स्पाइनल चोट संग लाभ को लागी योग्य हुन को लागी, तपाइँ कम्तीमा एक यी आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्नु पर्छ:
पूरा शरीर को कुनै भाग को कार्य को हानि को कारण मेरुदण्ड चोट। यसमा हात वा खुट्टाको पक्षाघात समावेश छ। Paraplegic र quadriplegic मान्छे लिस्टिंग को यो भाग अन्तर्गत लाभ को लागी योग्य हुन सक्छ। अन्य पनी लिस्टिंग को यो भाग अन्तर्गत योग्य हुन सक्छ। मेरुदण्ड चोटहरु अन्य मांसपेशिहरु लाई पक्षाघात गर्न सक्छन् र यसको कारणले गर्दा लाभ को लागी योग्य हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, मेरुदण्ड पेट, आन्द्रा, वा मूत्राशय मा पक्षाघात को कारण चोटहरु।
कम्तीमा दुई extremities मा आन्दोलन को असामान्य क्षमता। यो एक हात र एक खुट्टा वा दुई हात वा दुई खुट्टा हुन सक्छ। यो कठिनाई सन्तुलित जबकि उभिएको बेला हिड्ने, हिड्ने, एक सिट स्थिति बाट उभिने, वा प्रयोग हात र/वा हातहरु।
एक शारीरिक मेरुदण्ड समस्या धेरै खराब छैन चरम हुन, यी क्षेत्रहरु मध्ये कुनै एक मा एक ठूलो सीमा संग संयुक्त:
क्षमता बुझ्न, सम्झना, वा चीजहरु को उपयोग गर्न को लागी।
क्षमता फोकस वा छिटो काम गर्न।
आफैंको हेरचाह गर्ने वा अनुकूलन गर्ने क्षमता नयाँ परिवर्तनहरू.
तपाइँ एमआरआई, एक्स-रे, र परीक्षण परिणामहरु जस्तै चीजहरु देखाउन को लागी साबित गर्न को लागी तपाइँ ती मध्ये एक लाई भेट्न को लागी आवश्यक पर्दछ आवश्यकताहरु। यदि तपाइँ ती मध्ये एकलाई भेट्नुहुन्न भने आवश्यकताहरु तर तपाइँ अझै पनी काम गर्न सक्नुहुन्न, तपाइँ एक चिकित्सा व्यावसायिक भत्ता को लागी सोध्न सक्नुहुन्छ।
चिकित्सा व्यावसायिक भत्ता
A चिकित्सा व्यावसायिक भत्ता को अपवाद हो अपा dis्गता आवश्यकताहरु यो बनाउँछ सम्भव तपाइँ अपाability्गता लाभ को लागी अनुमोदित हुन को लागी। यो प्राप्त गर्न को लागी, तपाइँ एक अवशिष्ट कार्यात्मक क्षमता मूल्यांकन हुनु पर्छ। यो तपाइँको डाक्टर द्वारा भरिएको छ। यो तपाइँको विवरण अवस्था र यो कसरी बनाउँछ यो असम्भव छ तपाइँ काम गर्न को लागी। तपाइँको दावी फारम संग आरएफसी मूल्यांकन पेश गर्नुहोस्। एसएसए तपाइँको मेडिकल रेकर्ड, दावी, र तपाइँको उमेर र तपाइँको अघिल्लो काम जस्तै अन्य चीजहरु देख्न को लागी यदि तपाइँ पूर्ण समय काम गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। यदि उनीहरु निर्णय गर्छन् कि तपाइँ पूर्ण समय काम गर्न सक्नुहुन्न, तब तपाइँ अपाability्गता लाभ को लागी अनुमोदित हुन योग्य हुनुहुनेछ।
दावी दायर गर्दै
तपाइँ एसएसए को वेबसाइट को माध्यम बाट सीधै अपाability्गता लाभ को लागी एक दावी फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, यदि तपाइँलाई मद्दत चाहिन्छ, तपाइँ कुनै पनि मा एक नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ SSA शाखा कार्यालय। कोही त्यहाँ तपाइँको प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछ र तपाइँलाई भर्न र दावी फाइल गर्न मद्दत गर्दछ।
कर्मान स्वास्थ्य सेवा: https://www.karmanhealthcare.com/
स्पिनल अवस्था त्यो योग्यता अशक्तता लाभ: https://www.disabilitybenefitscenter.org/faq/spinal-conditions-qualify-disability
चिकित्सा व्यावसायिक भत्ता: https://www.disabilitybenefitscenter.org/glossary/medical-vocational-allowance
स्थानीय एसएसए कार्यालय: https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
Medicaid इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर
व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु: अपा T्गता को लागी फाइल गर्न को लागी3सुझाव
व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु: फिट रहनु जब तपाइँ एक स्पाइनल कर्ड चोट छ
स्पाइनल चोटहरु: रिकभरी को लागी लामो बाटो सजिलो बनाइयो
अपाability्गता लाभ को आधारभूत कुरा बुझ्न
अपाability्गता को लागी आवेदन